SAWIRADA TARANKA EEYAHA MAREYKANKA EE PITBULL TERRIER, 7 - EEYAHA
Sawirada Taranka Eeyaha Mareykanka ee Pitbull Terrier, 7
Spencer buluug-sanka brindle American Pitbull Terrier puppy at 3 bilood jir 50% Razor Edge iyo 50% Khadadka ilaaliyaha
Badh iyo Badh
Staffordshire Dog Eyga
Eyga Old Family - Magaca Irish
Yankee Terrier - magaca woqooyiga
Rebel Terrier - magaca koonfureed
Grayson The American Pit Bull Terrier at 3 sano jir— 'Grayson waxaa u geeyay milkiilayaasheedii hore lacag aad u badan. Maaddaama ay ahayd milkiile is dhiibis waxay toos u aadday qolka euthanasia. Qof mutadawiciin ah ayaa kula kulmay jidka, wuxuuna iga baryay inaan koriyo iyada hal toddobaad. Waan ka ogolaaday oo gurigeeda ayaan keenay. Daqiiqado gudahood ayay qaadatay seddex kittens oo aan dhalo ku quudin jiray. Sidee uga takhalusi kartaa eey sidaas ah? Waxay ahayd isla markiiba foster ku guul darreysatay! Waan hayay. Way weyn tahay iyada oo dhan eeyo kale oo waxaan u isticmaalaa iyada si aan u qiimeeyo dabeecadaha eeyaha ee pound aan ku shaqeeyo. Bannaanka nadiifinta qolka farmaajo , waa farxad weyn in la helo. Oo weliba waxay weli iga caawisaa korinta kittens! '
Grayson Godka Maraykanka Bull Terrier ee 3 sano jirka ah
Grayson American Pit Bull Terrier oo 3 jir ah oo ay weheliso asxaabteeda yar yar
NOWFOKWIDIT sanka cas ee Pitbull Terrier ee 2 sano jir ah— 'Mareykanka Pitbull Terrier, Peterson Sherman Tank / Dangerzone, Mckenna, RedNose, Bully, RedSplashKennel'
'Tani waa 16-jirkeyga APBT Petey. Waxaan ahay milkiilihii ugu horreeyay ee Pitbull laakiin waxaan khibrad u leeyahay noocyo lamid ah shakhsiyaad xoog leh. Waxaan si buuxda u jeclahay xidhmadan yar ee jacaylka ah. Petey waa inuu la joogaa aabbe markasta ama wuu dhimanayaa. Super smart pup, si fudud loo tababaran karo oo gebi ahaanba housetrained hore. Waan hubaa inaan naftayda u arkay cida ugu fiican eeyga!
Petey eeyaha 'APBT' ee jira 16 toddobaad
'Kani waa 3 bilood jir Razor's Edge Pitbull eey ah. Magaceedu waa Juicey. Waxaan ka qaaday sawirkan iyada oo moobilkeyga gacanta ku haysa ninkeyga. Iyadu waa wax ku soo kordhay qoyskeena. Way kharribtay. Waxay jeceshahay carruurta waxayna jeceshahay in lagu hayo. Waxay jeceshahay wax kasta oo is rogroga. Way jeceshahay socod . Waxay neceb tahay dadka tuuraya walxaha, eeyaha ka ciyey TV-ga iyo yaanyada. Caadooyinkeeda xun ayaa ah farayaa faraha iyo lugaha , qaadashada cuntada iyo orodka. Markasta oo qof albaabka garaaco way garaacdaa. Way ku caawinaysaa laakiin mararka qaarkood way i dhibaysaa. Waxay socodka 3 mayl maalin kasta . '
Juicey the Razor's Edge Pitbull puppy at 3 1/2 bilood jir
Juicey the Razor's Edge Pit Bull puppy at 3 1/2 bilood jir
'Maddie the Pit Bull Terrier at 1 sano jir waa eeyga ugu cunugga badan ee aan waligay la kulmo! Waxay jeceshahay inay bixiso dhunkasho waxayna jeceshahay qof kasta oo ay la kulanto. Waxay jeceshahay strawberries. (Waxaan ka akhriyaa khadka tooska ah waa u fiican yihiin eeyaha.) Waxay jeceshahay jardiinada eeyga oo ay ku aragto dhammaan asxaabteeda canine-ka ah. Waxaan ugu yeernaa eyga diva maxaa yeelay iyadu waa amiirad! '
Maddie oo ah Godka Mareykanka Bull Terrier sida eey
'Kobe the Pit Bull Terrier at 1 sano jir waa Maddie walaalkiis. Si loo soo koobo: goofball weyn. Wuxuu kudhowaad laba jibbaar yahay Maddie laakiin wuxuu u maleynayaa inuu yahay eey dhab ah. Wax yar ayuu ku jiraa dhinaca xun, wali wuxuu la qabsanyaa jirkiisa weyn. Wuxuu jecel yahay inuu arko walaashiis Maddie oo uu aado socod dheer oo jardiinada ah . '
Kobe the Pull Bull Terrier at 1 sano jir
Maddie iyo Kobe, Eydii Pit Bull Terrier
'Sadie the Pit Bull Terrier oo ah eey. Nabad ku naso, Saadiyow! Waxay ahayd eey weyn. Waa wax lala yaabo inta qof eey yeelan karto. Waxay ahayd mid xishood badan oo macaan. Sidoo kale weyn park eey taageere! Waxay bedeshay aragtideyda waalidkey iyo saaxiibbadeed 'Pit Bulls' taasna marwalba waan ku mahadnaqayaa! '
Roxy brindle brown iyo White Pull Bull Terrier markay tahay 1 sano jir
Butterscotch daahirka ah ee American Pit Bull Terrier iyada American Pit Bull Terrier / Staffordshire Bull Terrier mix (Shaqaalaha Bull Pit) eeyo
chihuahua eey yar madow iyo tan
8 bilood jir arday feeryahan
cad iyo cawl siberian husky
xadka collie jack russell mix
cavalier king charles isbaanishka havanese mix